नेपाल परिवार नियोजन संघको महानिर्देशकमा डा. नरेशप्रताप केसी नियुक्त #Familyplanning • Health News Nepal
महानिर्देशक पदका लागि ३९ जना प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
काठमाडौं, ३० माघ २०७७
नेपाल परिवार नियोजन संघको महानिर्देशकमा डा. नरेशप्रताप केसी नियुक्त भएका छन्। उहाँ एक वर्षका लागि संघको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्। यो पद करीव ६ महिना देखि रिक्त थियो ।
महानिर्देशक पदका लागि ३९ जना प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसमा केही विदेशीको समेत सहभागिता थियो । उक्त प्रतिष्पर्धामा उनीहरुलाई पछि पार्दै डा. केसी महानिदेशकमा नियुक्त भएका छन।
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका उनले स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत तत्कालिन आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, व्यवस्थापन महाशाखा, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरी सकेका थिए ।
डा.केसीले भने आज ‘नियुक्ति पत्र प्राप्त भएको छ । आगामी सोमबारबाट पद सम्हाल्छु।
Tags: #Health and population ministryCorona Virus #Covid19Dr.Naresh Pratap kcHiv AIDSNepal family planning association